मुख्य पृष्ठगीत सङ्गीतनवप्रतिभालाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन् : विनोद ‘विक्रम’ राई
कहिले उदितनारायण झा जस्तो गायक बनूँला भन्ने सपना बोकेका सोलुखुम्बूका विनोद ‘विक्रम’ राईको उदितनारायण जस्तै नाम कमाउन नसके पनि गायक बन्ने सपना भने पूरा भएको छ ।
सङ्गीत के हो ? भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदादेखि नै उनको मन सङ्गीतमा रमाउन थालेको थियो रे । अग्रज गायकहरू राजेश पायल राई, स्वरूपराज आचार्य, दीपक लिम्बू, उदितनारायण झा, रामकृष्ण ढकालले गाएका गीतबाट प्रेरित भएका विनोद ‘उनीहरू जस्तै गायक बन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला’ भनेर सोचिरहन्थे ।
उनको नाम विनोद राई थियो । नामको बीचमा विक्रम जोडिनुमा उनले दुखःद् खबर सुनाए । ‘सानैमा ‘विक्रम’ दाइको देहावसान भयो । दाइको मृत्युको शोकमा रोएको मनले दाइलाई बिर्सन गाह्रो भयो,’, उनले भने, ‘त्यही कारणले दाइको नाम पनि आफ्नो नामको बिचमा जोड्न मन लाग्यो । ताकि दाइ पनि हामीसँगै हाम्रै वरिपरि हुनुहुन्छ । त्यसपछि विनोद विक्रम नाम राखेको हो ।’
म पनि एकदिन गायक बन्छु भन्ने अठोटका साथ आठ वर्षको उमेरदेखि नै विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा गीत गाउन सुरु गरे विनोदले ।
विद्यालयमा आयोजना हुने हरेक कार्यक्रममा गीत गाएर सबैको मन खुसी बनाउँथे । अनि स्याबासी पाउँथे ।
आठ कक्षामा हुँदा विद्यालयमा भएको कार्यक्रममा राजेश पायल राईले गाएको गीत ‘नमाग मसँग’ गाएर प्रथम भएको अनुभव छ उनीसँग । त्यसपछि उनी झन् हौसिए ।
‘प्रथम पुरस्कार पाउँदा दङ्ग थिएँ । सानै थिएँ, सबैले आवाज राम्रो छ भनेर तारिफ गर्दा खुसीले मन फुरुङ्ग हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा भन्दा गीत गाउनमा मन रमाउन थाल्यो ।’
उनका अभिभावकलाई भने उनले गीत गाउँदै हिँडेको मन पराउँदैनथे । ‘बुबाआमाले पढाइमा निरन्तता देओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । तर सङ्गीतमा रमाउन थालिसकेको यो मनले गीत गाउन कसरी छोड्न सक्थ्यो र !’
‘सानो छँदा धेरै गायक गायिकाको गीत रेडियोमा सुन्ने गर्थेँ । मलाई पनि त्यस्तै गाउने रहर हुन्थ्यो । रेडियोमा गीत सुन्दै म पनि त्यसैमाथि स्वर मिलाउने प्रयास गर्थेँ,’ उनी सम्झिन्छन् ।
परिवारमा आफूभन्दा अगाडि परिवारमा गीतसङ्गगीतको क्षेत्रमा कोही पनि नलागेकाले परिवारलाई बुझाउन अलि गाह्रो भएको उनी सम्झिन्छन् । बिस्तारै विनोदले घरपरिवारको साथ र सहयोग पनि पाउन थाले ।
उनी भन्छन्, ‘गोठालो जाँदा होस् वा साथीभाइसँग, बाटोमा हिँड्दा होस् या घरमा एक्लै हुँदा, गीत गाउन कहिल्यै छोडिनँ ।’
आफूसँग प्रतिभा भए पनि त्यो प्रतिभालाई कहाँ प्रस्तुत गर्ने त ? ठाउँ थिएन । सङ्गीत सिक्नका लागि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर । जिल्लामा खासै अवसर नभएकाले समस्या थियो ।
यसैक्रममा २०७२ सालमा ‘वाकु धमाका हुँदै छ, जहाँ गायन क्षेत्रका नयाँ प्रतिभाहरूको खोजी गरिँदै छ रे’ भन्ने विनोदले थाहा पाए ।
आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म खोजिरहेको समयमा ‘यही हो मौका’ भन्ने लागेर अडिसनका लागि तयार भए ।
हजारौँ प्रतिभाको बीचमा उनी पनि गीत गाउन छानिए । त्यसपछि अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै कार्यक्रम अघि बढ्यो ।
‘निर्णायकहरूले गरेको सही मूल्याङ्कनका आधारमा म फाइनलसम्म पुग्न सफल भएँ,’ उनी भन्छन्, ‘फाइनलको दिन एकदम डर लागिरहेको थियो । डर, उत्साह अनि जिज्ञासाका कारण मुटुको ढुकढुकी यतिसम्म बढेको थियो कि मेरो पूरा शरीर नै काँपिरहेको थियो ।’
‘केही समयको पर्खाइपछि उद्घोषकले विजेताको रुपमा मेरो नाम लिनुभयो । डर, उत्साह अनि जिज्ञासाले ढुकढुक गरिरहेको मुटु सायद खुसीले होला अझ जोडले धड्किन थाल्यो । सपना हो कि विपना, एकपटक अलमल्ल परेँ,’ उनी थप्छन्, ‘सबैले बधाई दिन थाले । खुसीले सीमा नाघ्यो । आठ वर्षको उमेरदेखि गीत गाउँदै आएको म त्यो दिन मेरो सपनाले केही सानै भए पनि आकार पाउँदा साँच्चै दङ्ग अनि फुरुङ्ग थिएँ ।’
त्यसपछि भने उनको माग बढ्यो । जिल्लामा हुने विभिन्न कार्यक्रममा गीत गाउन जान थाले । त्यहाँबाट थोरै भए पनि पकेट खर्चको रुपमा कमाउन सुरु गरे उनले ।
आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा भएकाले होला, सायद थोरै भए पनि धेरै जस्तो लाग्थ्यो उनलाई ।
उनी भन्छन्, ‘सायद मेरो मेहनत र भाग्यले साथ दियो । ७२, ७३ र ७४ साल मेरा लागि उत्कृष्ट वर्ष भए । जुन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । थोरै भएपनि मेरो सपना पूरा भयो भन्ने सम्झन्छु ।’
२०७३ सालमा फेरि चोमोलुङ्मा आइडलको आयोजना भयो । त्यहाँ पनि गीत गाएर विजेता भए विनोद । २०७३ सालमै आयोजना भएको सोलु स्टार सिजन–२ को उपविजेता समेत भए । यस्तै २०७४ सालमा मनभिस्यो आइडलको पनि टाइटल जित्न सफल भए ।
आजसम्म लुकीलुकी हेर्छौ मलाई, एकादशी, फोहोर लुगालगायत गरी १२ वटा गीत रेकर्ड गराइसकेका छन विनोदले ।
‘अहिले अडियोभन्दा पनि भिडियोको जमाना छ । त्यसकारण मेरा गीतहरू सबै ओझेलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भिडियो बनाउने ठूलो रहर हो, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण भिडियो बनाउन सकिरहेको छैन ।’
१२ वटा गीत रेकर्ड गराए पनि गीतले खासै बजार पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । भिडियो बनाउन नसकेका कारण नै दर्शक–स्रोतासामु पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘तर जति स्रोताले गीत सुन्नुभएको छ, राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु,’ उनले भने ।
‘लाग्छ, चर्चा कमाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । म यो क्षेत्रमा कतिसम्म टिक्छु भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले बलेको आगो ताप्ने हो । निभेको आगो कसले बाल्न चाहान्छ र ! मलाई सय जनाले चिने पनि मेरा लागि त्यही आशीर्वाद हुने छ ।’
आफू अहिले पनि सङ्घर्षकै क्रममा रहेको उनी बताउँछन् । ‘चुनौतीहरू लाखौँ छन् । चर्चाको शिखर चुम्न नसके पनि निरन्तरता दिन भने म कहिल्यै डराएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सङ्गीत सिक्ने क्रममा छु । धेरै कुरा सिक्न अनि जान्न बाँकी नै छन् । मेहनत गर्न नछाडेपछि एकदिन भाग्यले पनि साथ दिने छ । एकदिन गन्तव्यमा पुगेरै छाड्ने छु, यही आशाका साथ मेहनत गरिरहेको छु ।’
आर्थिक चुनौतीसँगै आफ्नो गीतलाई दर्शक र स्रोताहरूले मन पराएर कतिसम्म साथ दिन्छन्, यो अर्को ठूलो चुनौती भएको उनी सुनाउँछन् ।
आफूजस्तै अन्य नवप्रतिभा अर्थात् तथा हजारौँ नवगायकलाई यस क्षेत्रमा धेरै चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
‘भनिन्छ नि, सफलताको पछाडि कसैको हात हुन्छ भनेर । मलाई पनि मेरो सङ्घर्षको यात्रामा साथ दिने मेरो प्यारो दाइ जीवन राई, थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष असीम थुलुङ, फ्रेन्डसिप युथ क्लब सोलुखुम्बूका अध्यक्ष महेश किराँती, फ्रेन्डसिप युथ क्लब शाखा लुक्लाका अध्यक्ष नाम्गेल शेर्पालाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ उनले सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिए ।
उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको साथ र सहयोगका कारण आज मलाई थप साहस र ऊर्जा मिलेको छ । उहाँहरूले मेरो करियरमा इटा थप्ने काम गरिदिनुभएको छ ।’